Entertainmentစတြေးလျတွင်အဓိကဖျော်ဖြေရေးဝယ်ယူမှုဖြင့် Gravity Media ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဆွဲငင်အားမီဒီယာနောက်ထပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကဝယ်ယူနှင့်အတူသြစတြေးလျအတွက်ချဲ့ထွင်
ဆွဲငင်အားမီဒီယာနောက်ထပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကဝယ်ယူနှင့်အတူသြစတြေးလျအတွက်ချဲ့ထွင်
သဘောတူညီချက်စတူဒီယိုနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-turnaround ပရိုဂရမ်းမင်း၏ဝန်ကြီးချုပ် provider ကဖန်တီး
Watford, ဗြိတိန်, 19th သြဂုတ်လ 2019 - ဆွဲငင်အားမီဒီယာ, ရှုပ်ထွေးသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဌာနများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, Telstra ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်, သြစတြေးလျထိပ်တန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာထဲကနေ, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment က Pty Limited က, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများဦးဆောင်ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျအခြေစိုက်ပံ့ပိုးပေးဆည်းပူးဖို့သဘောတူထားပါတယ် ကုမ္ပဏီ။ ဆွဲငင်အားမီဒီယာလက်ရှိတွင် Gearhouse အသံလွှင့်, HyperActive အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Input အားမီဒီယာအမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်သြစတြေးလျအတွက်လည်ပတ်နှင့်ဤရှာမှီးလက်ရှိဗြိတိန်အတွက် Input အားမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုစင်တာများအဖြစ်က၎င်း၏မဲလ်ဘုန်းမြို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆစ်ဒနီ Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါငွေပေးငွေယူသေးပြီးစီးခဲ့မမူနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ခြင်းအချို့သောအခြေအနေများဘာသာရပ်သြဂုတ်လကုန်ကဖြည့်စွက်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကကအပြည့်အဝဆွဲငင်အားမီဒီယာရဲ့သြစတြေးလျစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူပေါင်းစည်းသည်အထိင်း၏လက်ရှိအမည်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Hamish ကင်မရွန်, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment က၏ CEO ဖြစ်သူ CEO အဖြစ်ချနင်းကြလိမ့်မည်သို့သော်၎င်း၏လက်ရှိသြစတြေးလျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့နှင့်အတူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးပေါင်းစပ်ပြီးအဖြစ်ဆွဲငင်အားမီဒီယာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏အသစ်သောပိုင်ဆိုင်မှုလက်အောက်တွင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကယင်း၏လုပ်ငန်းဌာနခွဲများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အားကစားအခွင့်အရေးနှင့်မီဒီယာများန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Telstra ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်များကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကဆစ်ဒနီရဲ့မြောက်ဘက်ကမ်းပေါ်မှာ Artarmon အခြေစိုက်ထားတဲ့ဆန်းသစ်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်တီဗီကွန်ယက်များ, အားကစားအဖွဲ့ချုပ်, ဖျော်ဖြေရေး franchise, အေဂျင်စီများနှင့်စီးပွားဖြစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပေးပို့န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နှင့်အဆောက်အဦးထဲက Telstra ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကခဏရဲ့အသိပေးစာမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကြောင်းအရာပေးပို့, လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ 50 န်ထမ်းတစ်ဝှမ်းနှင့်အတူ, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တိုတိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရှည်လျား-form ကိုအစီအစဉ်များကိုအသကျရှငျနဲ့ post-ထုတ်လုပ်အဖြစ် branded အကြောင်းအရာနှင့်စီးပွားရေးကြော်ငြာများ။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ရဲ့န်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်:
တိုက်ရိုက်စတူဒီယိုကို အခြေခံ. ရေတိုပုံစံနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပုံစံ program ကိုဘဏ်ဍာ
24 /7ထုတ်လွှင့်တီဗီရုပ်သံလိုင်းကစားထွက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု (FTA, Pay ကို, IPTV)
အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများ, BRAND အကြောင်းအရာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်
အသံလွှင့် (OB) ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုအပြင်ဘက်မှာနေထိုင်ကြသည်။
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ် streaming များနှင့်ဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှု။
အမီလိုက်-up, တီဗီ encoding ကများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးန်ဆောင်မှုများ
အွန်လိုင်းများအတွက်ဝယ်လိုအား encoding ကအပေါ်အရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များနှင့်ဗီဒီယို, IPTVနှင့် app များကို
ဤသည်ဆွဲငင်အားမီဒီယာစက်တင်ဘာလ 2016 အတွက် TowerBrook Capital Partners ကနေသိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံခြုံရေးကတည်းကဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောပဉ္စမဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ်။ 2017 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏အဖြစ်အပျက်ဆက်သွယ်ရေးပူဇော်သက္ကာကိုချဲ့ထွင်ရန် Stranger Designs High-end ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းအဆောက်အဦများအပါအဝင်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို enable လုပ်ဖို့, အားကစားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Input အားမီဒီယာကိုဦးဆောင်ကျော် ယူ. , သြစတြေးလျဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီ။ မတ်လ 2018 ထဲမှာကမ်ဘာဦးကအသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ချက်ချင်းမြောက်ပိုင်းဥရောပများ၏ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်အစေခံရန် Gearhouse အသံလွှင့်ဂျာမဏီအဖြစ်နာမည်ပြောင်းလဲ။ ဇူလိုင်လ 2018 ထဲမှာ Proshow အသံလွှင့်, ကတည်းကအောင်မြင်စွာဆွဲငင်အားမီဒီယာရဲ့ Gearhouse အသံလွှင့်ယူအက်စ်အေစစ်ဆင်ရေးသို့ပေါင်းစည်းထားပြီဖြစ်သောအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါ, တလျှောက်လုံးထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူမှမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရရှိခဲ့သည်။
ယင်း၏ Artarmon အခြေစိုက်စခန်းမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ရဲ့သော့ချက်အဆောက်အဦများပါဝင်သည်:
နှစျခု 100m2 HD စတူဒီယိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းပေါင်း
တစ်ဦးကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်မာစတာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တင်ပြချက် suite ကို
ဆယ့်တစ် HD/ 4K ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဒီဇိုင်းအစုံ
An လွန်စွာလိုလားသော Protools 5.1 အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှု suite ကို
ယောဟနျသနယူတန်, တည်ထောင်သူ & CEO ဖြစ်သူဆွဲငင်အားမီဒီယာ, commented:
"ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကအတိတ်ကာလသုံးနှစ်အတွင်းမှာသိသိသာသာပြင်ပဝင်ငွေကြီးထွားအောင်မြင်တစ်ဦးအထင်ကြီးဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိပြီးကြောင့်ကယ်တင်တတ်၏အလုပ်၏အရည်အသွေးများအတွက်လေးစားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Gearhouse အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Input အားမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှစ်ပေါင်းများစွာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့သြစတြေးလျ၌အကြှနျုပျတို့၏လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူသဘာဝမထိုက်မတန်အဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။
"ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ရဲ့အားသာချက်အဓိကသြစတြေးလျအမျိုးသားအားကစားကောင်များ, ဂီတနဲ့ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်သြစတြေးလျရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အခွက်တဆယ်အချို့ပါဝင်သော Multi-ပလက်ဖောင်းဖျော်ဖြေရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၏ဖန်တီးမှုနှင့်အတူခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးများပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကြီးထွားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တိုးမြှင်န်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူဆက်လက်ချုပ် Entertainment ကအသင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ဆွဲငင်အား Media Group သို့အကြောင်း
ဆွဲငင်အား Media Group သို့အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, ဖန်တီးသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ရှုပ်ထွေးသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဌာနများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Gearhouse အသံလွှင့်, HyperActive အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Input အားမီဒီယာ - - ဒါဟာသုံး core ကိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖြတ်ပြီးလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဗြိတိန်, ပြင်သစ်, ဩစတြေးလျ, အမေရိကန်, ဂျာမနီနှင့်ကာတာနိုင်ငံအတွက်ရုံးတွေရှိတယ်။
Gearhouse အသံလွှင့် ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်သည်နှင့်ထုတ်လွှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်း, စီမံကိန်းကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုအတွက်အထူးပြုသည်။ ဒါဟာအဓိကအားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များပေးအပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဦးသက်သေပြချက်တွင် track record ပေးထားပါတယ်။ မြင် www.gearhousebroadcast.com
HyperActive အသံလွှင့် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအဘို့အခန်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု tools များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအာကာသဖြတ်တောက်ခြောက်သွေ့တဲ့အမြတ်ရခြင်းအများ၏ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ပေါင်းစုံအတွက်နောက်ခံနှင့်အတူ လွန်စွာလိုလားသော နှင့် EVS Workflows ၎င်း၏အင်ဂျင်နီယာများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအမည်များအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနေကြသည်။ မြင် www.hyperactivebroadcast.com
input မီဒီယာ ကမ္ဘာတဝှမ်းအပြာရောင်-chip ကို client များနှင့်အတူဝန်ကြီးချုပ်အားကစားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖန်တီးမှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် programming နဲ့ဖောက်သည်ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထုတ်လုပ်သူများ, ဒါရိုက်တာများနှင့်အယ်ဒီတာများတစ်ဦးပါရမီအဖွဲ့ကလုပ်ကိုင်။ မြင် www.inputmedia.tv
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကအကြောင်း
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Entertainment ကဆစ်ဒနီရဲ့မြောက်ဘက်ကမ်းပေါ်မှာ Artarmon အခြေစိုက်ထားတဲ့ဆန်းသစ်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်တီဗီကွန်ယက်, အားကစားအဖွဲ့ချုပ်, ဖျော်ဖြေရေး franchise, အေဂျင်စီများနှင့်စီးပွားဖြစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပေးပို့န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ 50 န်ထမ်းတစ်ဝှမ်းနှင့်အတူ, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တိုတိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရှည်လျား-ပုံစံအစီအစဉ်များနေထိုင်ပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာ branded အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာအဖြစ် Post-ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-19
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Capture ပွဲတော် Beauregard